Nicolas Otamendi:Noloshaydii ayaa u hibeeyay kooxda Man City: | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Nicolas Otamendi:Noloshaydii ayaa u hibeeyay kooxda Man City:
Published on January 18, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(18-1-2018) Nicolas Otamendi ayaa saxiixay heshiis cusub oo kooxda ku sii haynaya ilaa 2022, Otamendi oo Man City u ciyaaray 118 kulan dhamaan tartamada ayaa kaga soo biiray City kooxda Valencia xagaagii 2015 lacag dhan 33 milyan oo Pound wuxuuna hore u saxeexay heshiis ku ekaa 2020 ka.
Daafaca dhexe ayaa xili ciyaareedkan si joogto ah uga mid ahaa safka kooxda hogaanka u haysa HOryaalka Ingiriiska, Guardiola ayaana hore u sheegay in Ciyaaryahankan uu muhiim u yahay guulahooda.
Kooxda Manchester City ayaa hadda si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay heshiis cusub oo waqti dheer ah ku abaal marisay difaaca kooxdeeda iyo xulka qaranka Argentina ee Nicolas Otamendi. Manchester City ayaa Nicolas Otamendi la soo wareegtay xagaagii 2015 kii wuxuuna hadda ka mid yahay ciyaartoyda ugu muhiimsan safka Guardiola isla markaana galay quluubta jamaahiirta Sky Blues.
Warka ay Manchester City ugu dhawaaqday heshiiska Nicolas Otamendi ayaa lagu yidhi: “Nicolas Otamendi waxa uu kordhiyay qandaraskiisii City oo uu ka hdigay ilaa 2022. Difaaca ree Argentina waxa uu xili ciyaareedkan ku soo jiray qaab ciyaareed cajiib ah isaga oo seegay hal kulan oo kaliya ee 23 kii kulan ee Premier League ee ilaa hadda la soo ciyaaray”.
“Ujeedka kaliya ee aan leeyahay ayaa ah in aan caawiyo kooxda iyo in aan siiyo wax kasta oo aan awoodo kooxda, maalin walba waxbaan baranayaa intaan kahoos ciyaarayey Pep, waanan ku riyaaqaa kubadayda, waxaan dareemayaa in aan weli sii wanaagsanaanayo ciyaaryahan ahaan.
Gueardiola ayaa eeganaya in uu daafac cusub kusoo daro kooxdiisa inta lagu gudo jiro suuqa kala iibsiga bishaan kaasoo xoojin unoqda Otamendi iyo Stones.